Dhiigaa fi Dafqa Sabboontoota Oromootin Bu’aa siyaasaa Argachuuf Hololuun Of Gowwoomsuudha. Baarentuu Gadaa Iarraa/// – Beekan Guluma Erena
Dhiigaa fi Dafqa Sabboontoota Oromootin Bu’aa siyaasaa Argachuuf Hololuun Of Gowwoomsuudha. Baarentuu Gadaa Iarraa///	Beekan Erena
Asoosama, Education January 19, 2017January 19, 2017Qabsoo Oromoo
Ummanni Oromoo aadaa, seenaa, afaan fi duudhaa isaa dhiigaa fi dafqaisaatiin tikfataa as gahe. Funduraafis dhiiguumaa fi dafqa isaatiintikfataa jiraata. Ni guddifatas.
duudhaa isaa walumaa galatti eenyummaan isaa balleessuuf hedduucarraaqan. Weeratoonni kun amma Wayyaanee har’aattis toftaa haajijjiratan malee duulli Oromoorratti taasisan hin dhaabbanne. Aadaa,seenaa, afaanii fi duudhaa walumaa galatti abbaa biyyummaa isaarrattikalees har’as yakka raawwachaa jiru. Ummanni Oromoo biyya isaakeessatti akka lammii lammaaffaatti hacucamaa, biyya isaarratti mirga wal qixummaa, mirga hiree ofii ofiin murteeffachuu dhabeemankaraarfamaa jira.
addunyaaf fakkeenya ta’u qabuu dha. Ummanni aadaa bonsaa, sirna waliin bulmaataa baayyee ammayyoome kan akka Sirna Gadaa qabu kun guyyaa Habashoonni “Nafxanyoonni” qawwee warra lixaatirraa argataniin itti duulaniirraa kaasee aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa isaa, walumaa galatti biyya isaa weertootarraa bilisa baasuuf, akka hinbannee eeguuf wareegama ulfaataa safaramee hin dhumne baasee jira.
jecha wareegameera, cabeera, dararameera, itti salphifameera, biyyaa itti godaansifameera. Walumaa galatti jiruu fi jireenyi isaa itti dhabeera. Ilmaan isaa qaqqaalii danuun itti dhiiganiiru, Ammalleen eenyummaa isaa tikfachuu fi biyya isaa deeffachuuf ilmaan isaa baddaa gammoojjitti wareegama gurguddaa kaffalaa jiru. Akka dhiiga isaanitiin mirgi abbaa biyyummaa Oromoo milkaawus shakkiin hin jiru.
Akkuma eenyuyyuu quba qabutti Habashoonni ilmaan nafaxanyootaa kaleessaas ta’ee Wayyaaneen har’aa aadaa, afaan , seenaa fi duudhaa Oromoof jaalalas at’e kabaja hin qaban. Lafa Oromoo malee, qabeenya Oromoo saamaa jiran malee aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa Oromoof kabajaa fi jaalala hin qaban. Kabajuu, Jaalachuu fi akka qabeenya saboota Impaayeera sana keessa jiranii keessaa isa tokkootti ilaaluun hafnaan akkuma aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa saba addunyaa kanarra jiru isa tokkoottuu fudhachuuf fedhii hin qaban. Waan Oromoo Jibbaan guutamanii ilaalu. Aadaa fi duudhaa isaatii mitii Oroomoodhumaawuu akka abbaa biyyaa biyya isaatti hin fudhatan.
milkeessuufis hayyoota Oromoo, Abbootii Gadaa, qabsaawoota Oromoo hedduu hidhaniiru,ajjeesaniiru, dararaniiru. Lafa safuu; Ardaa aadaa fi duudhaa Oromoo mancaasanii balleessuuf tattaaffii guddaa taasisaniiru. Qaaluu Oromoo galma irratti diiguu fi gubuuniis
Wayyaaneen har’aas Abbaa Gadaa hidhaa, irreecharratti dhukaasa bantee nama ajjeesaa jirti. Ilmaan Oromoo qaroo guddina aadaa, seenaa fi duudhaa saba Oromootif halakanii guyyaa hojjetan kumoota hedduun lakkaawwamanis hidhaa, ajjeesaa fi biyyaa godaansisaa jirti. Walumaa galatti kalees har’as yakkoonni danuun aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa Oromoorratti raawwachaa jiru malee wanti bu’uurrarraa fooyya’e hin jiru. Haata’uutii garuu wayyaanee har’aas ta’e weerartoonni kaleessaa akka yaadanii fi barabaadanitti milkaawuu hin dandeenye.
Galanni gotota Oromoo dhiiga isaanii dhangalaasaa turanii fi jiraniif haata’uutii eenyummaan Oromoon guyyaarraa gara guyyaatti akka biiftuu ganamaa calaqqisaa jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin aadaa,afaan, seenaa fi duudhaa isaa guddifachaa jira.
Murni har’a impaayeera itiyoophiyaa afaan qawweetiin bitaa jirtu tun waggoota 25n darbaniif yakka meeqa akka ummata Oromoos ta’ee saboota cunqurfamtoota kaanirratti raawwachaa turtee fi jirtu eenyu jalaawuu dhokotaa miti. Maqaa sabaa fi sabalammootaatiin siyaasa hattummaa gaggeessaa jirtuun akka waan aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa sabootaa ishiin deebifteetti hololataa turte. Hololataas jirti. Odoo saboota mirga isaaniif qabsaawan keessumaa ammoo ilmaan Oromoo manneen
lafarra jiru garuu bara Wayyaanee keessa sabni mirgi isaa kabajameef hin jiru. kan aadaan, seenaa fi duudhaan isaa seeraa fi sirnaan akka ofii beekuu fi barbaadutti deebi’eefis hin jiru. Toftaa fi tarsiimoon isaa gara gara haata’u malee kalees bara wayyaanee har’aas dhiittaa mirgaa, hacuccaan aadaa fi seenaa, saamichi jiru tokkuma. Keessumaa ummanni Oromoo kalees har’as hacuccaa hanga hin qabne keessa jiraachuun eenyufuu ifaadha. Wayaaneen safuu, maal naan jedhanii hin beektu. Sobduudha, fakkeesituudha. Gara jabeettidha. Akkuma waggoota 25n darbaniif dhimmoota gara garaarratti kijibaa fi fakkeessaa baate ammas soba hin
fakkaanne sobaa jirti. Kunoo “guyyaa sabaa fi sablammootaa” jechuun hololli gaggeessaa turtee fi jirtu itti hanqannaan tibba kana ammoo waan itti hin dhiigiin waan itti hin dafqin qabattee abbaa itti ta’uuf Oromoo sobuu fi sossoobuuf hololaa jirti. Soba afarsaa jirti.Garuu itti hin milkooftu.
Akkuma hunduu quba qabu Sirni Gadaa Oromoo sirna waggoota dhibboota hedduu lakkoofsise, sirna Oromoon addunyaa kanaaf gumaacheedha. EegaaSirna Gadaa, sirna akkanaa sirna dhiheenya kana qabsoo ilmaan Oromootiin yuniskootti galamaawe wayyaaneen butattee kaatee hololaa jirti. Sirnichi dhiigaa ilmaan Oromootiin tikfamee kan as gahe ta’uun osoo beekamuu ishiin akka waan ofii uumtee, ofii kuniinsitee, kakka’umsa ishiitiin yuniskootti galmeessiteetti holola irraa tolfattee of faarsaa jirti. Holola fokkisaa fudhatama hin qabne gaggeessaa jirti. Dhugaan jiru garuu gadaan kan galmee yuniskootti galmaawe dhiigaa fi dafqa ilmaan Oromoo, ifaajjii hayyoota Oromootinii.
Murni tun afaaniin aadaa, seenaa, afaan fi duudhaa akkasumas mirga sabootaa kabajee kabachiisaan jira jettus qabatamaan garuu takkaawuu muldhatee hin beeku. Inumaawuu dalgaan ishii martuu kan kanneen duubatti harkisuudha. Kan fakkeessiif hojiirra olanis qabsoo ilmaan sabootaa taasisaniin kan dhufe malee kan wayyaaneen jaalattee goote ykn hojiirra olchitee miti. Yuniskootti hambaa ilma namaa addunyaa kanaa ta’ee Galamaawuun sirna Gadaa Oromootis bu’aa qabsoo Oromoo,
Hololli har’a wayyaaneen Anatu gadaa yuniskootti galmeesise, anatuu dimookiraasii isiniif fide, sirna kiyyatu aadaa, seenaa, duudhaa fi afaan ummattootaa deebiseenis waan fakkaatuu miti. Holola dharaa akkasii bara kana keessa gaggeessuunis of gowwoomsoo yoo ta’e malee bu’aan siyaasaa inni ishiif fidu hin jiru.
Oromoon wayyaaneen diina innikaa aadaa, seenaa, afaan fi duudhaa isaa akkasumas eenymmaa isaa ta’uu tolcheet beeka. Diina isa balleessuuf hojjechaa jirtu ta’uus himtuu hin barbaadu. Waan diinummaa wayyaanee beekufis kunoo qabsoo waliraa hin cinne, FXG fi qabsoo roga maraa irratti gaggeessaa jira. Eenyu akka itti dhiigee, itti cabee Gadaa asiin gahe waan beekufis Holola bu’a hin qabne wayyaaneen anatu yuniskootti galmeesisee jettuufis gurra hin qabu. Amma Guyyaan sabaa fi sablammii inni dhugaa, abbaan biyyummaa, mirgi hiree ofii ofiin murteeffachuu milkaawuttis qabsoo isaa kan itti fufu ta’uu dhugaan har’a impaayeera Itiyoophiyaa keessa jiru ifatti mirkaneessa. Kan
← UTUBAA LEEQAATIIN: Kuusaawwan walaloo garaagaraa kana dubbisaa waliifis daddabarsa!